Ny fividianana akanjo ambanin'ny akanjo dia iray amin'ireo asa tena ankafizin'ny vehivavy lamaody. Raha ny zava-drehetra, ny tanjon'ity akanjo marevaka ity dia sady tsara tarehy, mahafinaritra ary mahandro. Ary raha ny safidy maoderina dia mifanaraka amin'ny fironana farany amin'ny lamaody farany, dia toy izany koa ny toeram-pisakafoana iray manokana ho an'ny fanirian'ny tompony. Manomboka amin'ny vanim-potoana mankany amin'ny vanim-potoana, manamboatra singa vaovao ny mpahaikanto Underwear 2016 dia manambatra ny toetra faran'izay marevaka indrindra, manasongadina ny fanatsarana sy ny fahalemem-panahy.
Ankona ambanin'ny akanjo vaovao 2016
Ny kilasin'ny vehivavy modely 2016 dia asehon'ireo karazana modely maotina. Ny famoriam-bola vaovao dia feno sipresy sy bala tsara tarehy, ary amin'izao fotoana izao dia misy kitapo miaraka amin'ny kofehy, kiraro, akanjo. Lasa malaza kokoa ny fampifangaroana romantique. Na dia izany aza, ho an'ny ankizivavy maro dia ny modely vaovao amin'ny lamaody amin'ny lamaody izay manana anjara lehibe amin'ny 2016. Raha ny marina, ny mifanaraka amin'ny lamaody lamaody dia tsy safidy tena izy, fa koa ny endriky ny fanangonana farany. Ary, araka ny fitsipika, ny vahaolana dia samy hafa ny vahaolana tsy ampoizina sy tany am-piandohana. Andeha hojerentsika hoe karazana lobololotra inona no aseho amin'ny katalaogy lamaody farany amin'ny 2016?
Fehikibo miaraka amin'ny harona mafy . Ny safidy lamaody ho an'ny 2016 dia ny lohahevitra ambony amin'ny lamba vita amin'ny rongony tsy misy miala amin'ny kaopy. Ireo boribory ireo dia aseho amin'ny kipantsona tsara tarehy, satiny sy tulle decor. Ny mpanamboatra manolotra ny fomba hanampiana ny endriny amin'ny marika mistery, maniry ny modely amin'ny maizim-be maitso - mainty, manga, volomparasy, bordeaux.
Mini Thong . Ny lohahevitra mahagaga sy mamohehatra indrindra amin'ny lobaka 2016 dia heverina ho marika g string tsy misy gom. Ireo karazana sokitra ireo dia manana endrika plastika boribory izay mifanaraka tsara amin'ny endrika. Ny akanjo toy izany dia tsy hita maso na dia ao anaty akanjo tsara indrindra sy mendrika indrindra, izay manan-danja amin'ny vanin-taona amin'ny fahavaratra.
Endrika voatovana rehefa voaaraky ny fototeny ? Ireo mpilalao mahafatifaty fanta-daza dia manolotra mofomamy tsy mahazatra sy brakety tsara tarehy tsy misy lanjany amin'ny lamaody. Ny tendron-tserasera dia matetika ampitomboina amin'ny lace trim, izay manampy trotraka sy fahalemena ho an'ny fanasan-damba.
Fashionable fitafiana loko 2014
Sherri Hill - ny vanim-potoana vaovao amin'ny fotoana rehetra!
Fashionable jacket 2016
Women's denim anklements 2016
Bando mofomamy 2015
Fanamafisana tsy misy fepetra - inona izany ary inona no andraikiny?
Ankizy sy raim-pianakaviana vaovao - ahoana ny hiomanana amin'ny olom-pantany iray?
Ahoana no handraisana kafe kafe?
Fandaminana ny loggia
Nodimandry ilay fialantsasatra, ary inona no tokony hatao amin'ny akanjo fampakaram-bady?
Nesorin'i Shakira ilay kabary noho ny aretin'ny zanany
Museum of Canal Panama
Women's Shoes - Lohataona 2016